Izindaba - Iyini indwangu yejezi elilodwa
Izimiso Zethu Ezisiqondisayo
Indwangu yokugqoka ye-yoga
fashion bafake indwangu
indwangu egaywe kabusha
Indwangu ye-polyester ikotini
Iyini indwangu yejezi elilodwa
I-Jersey iyindwangu ehlanganisiwe ebizwa nangokuthi i-plain knit noma indwangu ehlanganisiwe eyodwa.Kwesinye isikhathi siphinde sithi igama elithi “ijezi” lisetshenziswa ngokukhululeka ukuze libhekisele kunoma iyiphi indwangu elukiwe engenalo ubambo oluhlukile.
Imininingwane ngokwenza indwangu yejezi elilodwa
Ijezi lingenziwa ngesandla kudala, futhi senza emishinini yokuluka eyisicaba futhi eyindilinga okwamanje.Iziluphu zejezi zenziwe kusukela kumthungo wokunitha oyisisekelo, lapho iluphu ngayinye idwetshwa ngeluphu engezansi kwayo.Imigqa yezihibe yenza imigqa eqondile, noma ama-wales, ebusweni bendwangu kanye nemigqa ephambene, noma izifundo, ngemuva.Ama-Jersey knit anesisindo esincane uma eqhathaniswa namanye amaluni futhi angama-weft asheshayo ukukhiqizwa.Ijezi linwebeka kakhulu lapho liwela khona kunobude, lingase lithambekele ekugijimeni, futhi ligoqeke emaphethelweni ngenxa yomehluko wokushuba kwesimo ngaphambili nangemuva.
Isici sendwangu yejezi elilodwa
1, Izinhlangothi zabo zangaphambili nangemuva zihlukile komunye nomunye.
2, Izindwangu ezikhiqizwa ngendlela yamashubhu, kodwa futhi zingasikwa futhi zisetshenziswe ngendlela yobubanzi obuvulekile.
3, Ububanzi obubanzi bungatholakala ngezindwangu zejezi elilodwa uma kuqhathaniswa nezimbambo nezindwangu ezihlanganisiwe.
4, Inwebeka cishe ngesilinganiso esifanayo ngokuphambeneyo nangobude.
5, Uma zeluliwe kakhulu, izimo zazo zingahle zihlanekezelwe.
I-6, Uma isetshenziswa njengengubo, kubi kakhulu ukugoqa umzimba kunezinye izindwangu ezihlotshiswe nge-weft ngenxa yokuguquguquka kwazo okuncane.
I-7, ijezi elilodwa elilukiwe lendwangu linamathuba ambalwa okwenza iphethini kunamanye amaluni.
8, Njengoba umbiko wokunitha wakhiwe enalithini eyodwa epuletini elilodwa, wuhlobo lokunitha olunenani elincane lentambo elichithwa endaweni ngayinye.
9, Uma kusikwa, ama-curls avela ezinhlangothini abheke ngemuva kwendwangu futhi ukusuka phezulu nangaphansi ukuya ngaphambili kwendwangu.
10, Banokuthambekela okuncane kokushwabana.
Qeda nokwelashwa kwendwangu yejezi elilodwa
Ijezi lingase liqedwe ngokulala, liphrintwe, noma lifekethisiwe.Izinhlobonhlobo zamajezi zihlanganisa izinguqulo zenqwaba yejezi elihlanganisiwe ne-jacquard.Amajezi enqwaba anezintambo ezengeziwe noma i-sliver (intambo engasontiwe) efakwe ukwenza izindwangu ze-velor noma zoboya mbumbulu.Ijezi le-Jacquard lihlanganisa ukuhlukahluka kokuthunga ukudala imiklamo eyinkimbinkimbi eboshwe endwangu.Izindwangu ze-Intarsia ziyizindwangu zejezi ezisebenzisa izintambo ezinemibala ehlukene ukuze zikhiqize imiklamo futhi zibiza kakhulu ukukhiqiza kunokuphrinta umklamo njengokuqeda.
Ukusetshenziswa okungenzeka kwendwangu yejezi elilodwa
Ijezi lisetshenziselwa ukwenza i-hosiery, izikibha, izingubo zangaphansi, izingubo zemidlalo, namajezi.Iphinde yafakwa emakethe yempahla yasekhaya futhi isetshenziselwa okokulala nama-slipcover.
I-Fuzhou Huasheng Textile izimisele ukuhlinzeka ngendwangu yejezi elilodwa esezingeni eliphezulu futhi engabizi kumakhasimende emhlabeni wonke.Nganoma yimuphi umbuzo, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi.
Isikhathi sokuthumela: Dec-30-2021
Ezinye izindaba ezibalulekile mayelana nesitifiketi se-GRS
I-Global Recycle Standard (GRS) iyindinganiso yamazwe ngamazwe, yokuzithandela, nephelele yomkhiqizo ebeka izimfuneko zomkhiqizi wenkampani yangaphandle...
I-Jersey iyindwangu ehlanganisiwe ebizwa nangokuthi i-plain knit noma indwangu ehlanganisiwe eyodwa.Kwesinye isikhathi siphinde sithi igama elithi “ijezi” lisetshenziswa…